စျေးကွက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့် NFT ပူဖောင်းပေါက်ကွဲ
NFT စျေးကွက်ဟာဒေါ်လာ ၁၀၂ သန်းမှဒေါ်လာ ၁၉.၄ သန်းအထိ ၉၀% ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။
Crypto-အနုပညာနှင့်ဆက်နွယ်သော NFTs များကို verse နှင့်ဆက်စပ်သော NFTs များဖြစ်တဲ့ဒီဂျစ်တယ်အိမ်ခြံမြေနှင့်အပိုပစ္စည်းများကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကျော်ကကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။
NFT သည်မကြာသေးမီကပင် Eminem နှင့် Snoop Dogg ကဲ့သို့ကျော်ကြားသူများစွာနှင့်ပင်မဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် NFT စျေးကွက်အမြင့်ဆုံးအထိဝယ်လိုအားသည်တစ်ထပ်တည်းကျသည်။ ဒေါ်လာ ၁၀၂ မီလီယံတန်ကြေးရှိ NFT ကိုတစ်ရက်အတွင်းရောင်းချခဲ့သည်။ Crypto စုဆောင်းမှုသည်စုစုပေါင်းရောင်းအားအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ စျေးကွက်အထွတ်အထိပ်ရောက်သောခုနစ်ရက်တွင် NFT ကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာသန်း ၁၇၀ ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
သို့ရာတွင်၊ NFT ၏တွန်းအားသည်ဒေါ်လာ ၁၉.၄ သန်းသာရောင်းရငွေမှာပြီးခဲ့သောအပတ်က။ ၎င်းသည်စတော့ဈေးကွက်ဈေးကွက်၏ ၉၀ ရာနှုန်းနီးပါးပျက်စီးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုပမာဏထဲမှဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၂ သန်းသည် crypto စုဆောင်းခြင်းကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကုန်သွယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရောင်းရငွေစုစုပေါင်း၏တစ်ဝက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို crypto ဈေးကွက်တွင်မကြာသေးမီကရုန်းကန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တစ်နည်းအားဖြင့် crypto စုဆောင်းခြင်းသည် NFT စျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏အောင်မြင်မှုကိုကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။
ဒေတာအရ CryptoPunks နှင့် Hashmask ကဲ့သို့သော NFT စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းအချို့သည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤစျေးကွက်များသည်အဆင့် ၇ ခုရှိသည့်အဓိကစျေးကွက်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှု၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အပတ်စဉ်နှင့်နေ့စဉ် NFT ဖျော်ဖြေမှုများပြိုကွဲခြင်း
Crypto-အနုပညာနှင့်ဆက်စပ်သော NFTs များကို verse နှင့်ဆက်စပ်သော NFTs များကဒီဂျစ်တယ်အိမ်ခြံမြေများနှင့်အပိုပစ္စည်းများကိုအပတ်အတွင်းကျော်ဖြတ်လိုက်သည်။နောက်ဆုံး။ ဒေတာများအရ Metaverse NFTs သည်ဒေါ်လာ ၃.၃ သန်းရောင်းချခဲ့ရပြီး crypto-art NFTs ကိုဒေါ်လာ ၃ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ Sports NFT ကုန်သည်များသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဒေါ်လာ ၃.၁၆ သန်းဝန်းကျင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည်။
Crypto စုဆောင်းခြင်းများသည်စျေးကွက်အမြင့်ဆုံးမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံး NFT များဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ အတွင်း ၆၆% လျော့နည်းသွားသည်။
အားကစားချစ်ပ်များနှင့်ဆက်နွယ်သော NFT အမျိုးအစားသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း ၄ င်း၏တက်ကြွသောနေရာများကို ၅၅% လျှော့ချခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကပင် NFT အမျိုးအစားအထွတ်အထိပ်တစ်ခုစီတွင် ၁၂,၀၀၀ ကျော်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအရေအတွက်သည် ၃၉၀၀ အထိသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး ၇၀ ရာနှုန်းလျော့ကျသွားသည်။
နေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ crypto စုဆောင်းခြင်းများအတွက်အဓိကနှင့်အလယ်တန်းစျေးကွက်များသည်လက်ရှိ NFT ရောင်းအားအတွက်အကြီးမားဆုံးဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။
ဒေတာအရ NFT bubble သည်ပြိုကွဲနေသည်။
အားနည်းချက် Lexmark ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်များ
2021-06-23 11:01:30 | မင်္ဂလာပါ...
IBM X-Force လုံခြုံရေးသုတေသီတစ်ယောက်က Lexmark ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ် G2 တပ်ဆင်ခြင်းအထုပ်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ XC2235 ဘက်စုံသုံးပုံစံအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသော Printer Software G2 installation package တွင်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Credit: Lexma...
CybermatinéeSécurité Nouvelle Aquitaine 2021 - ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်
2021-06-23 01:38:12 | မင်္ဂလာပါ...
နွေရာသီတွင် Le Monde Informatique ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်သည်သင်၏CybermatinéeSécurité 2021 သံသရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။ Nouvelle Aquitaine ဇာတ်စင်ကိုယနေ့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အထူးသဖြင့် Gurvan Quenet၊ CISO ဘော်ဒိုးလေဆိပ်၊ Céclien Charlot နှင့် Jean-Baptiste Boix တို့၏သက်သေခံချက်များနှင့် CISO နှင့်လိမ်လည်မှုန...
Hackernoon ဟာ blockchain ဂိမ်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲကိုဝင်ရောက်လာသည်
2021-06-22 21:59:11 | ဘလောက်...
HackerNoon သည် Blockchain Game Alliance တွင်ပါ ၀ င်သည်။ HackerNoon သည် Blockchain Game Alliance နှင့်ပူးပေါင်းကြောင်းကြေငြာရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် blockchain ဂိမ်းစက်ရုံအားကြီးထွားလာရန်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအ...
ဗဟိုမှဗဟိုချုပ်ကိုင်ခြင်း၏အန္တရာယ်များရှိလင့်ကစား၎င်းသည်နံပါတ် ၁၀ မဟုတ်ဘဲ crypto ကြီးထွားမှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်
2021-06-22 21:35:48 | ဘလောက်...
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၏အန္တရာယ်များရှိနေသော်လည်း၎င်းသည် Crypto ကြီးထွားမှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ Unhashed # ၁၀ Crypto market နှင့် ပတ်သက်၍ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ ၂၆ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၃၆၅ ရက်အွန်လိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်သည်များအတွက်မူ၎င်းသည်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်အခ...
စိန်ခေါ်မှုကရှင်းပြသည် - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္toာရေးလမ်းညွှန်
2021-06-22 21:21:46 | ဘလောက်...
DeFi ရှင်းလင်းချက် - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္toာရေးလမ်းညွှန် DeFi သည် ၂၀၂၀ ၏အဓိကစကားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းသည်မျှတပါသည်၊ DeFi တိုကင်များသည်များစွာသောငွေပေးချေမှုများနှင့်အတူဤနှစ်၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ DeFi သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘ...
Loeb ၏တတိယအချက်သည် crypto လိုက်နာမှုရှိသည့် startup ciphertrace တွင်ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
2021-06-22 18:57:58 | ဘလောက်...
ဒိုင် Loeb ၏နည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Third Point Ventures ဦး ဆောင်သည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇. ၁ သန်းသော Series B ကို Crypto ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ CipherTrace မှပိတ်သိမ်းလိုက်သည်။ CipherTrace သည် ru အတွင်းရှိအစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးဆော့ဖ်ဝဲက...
သုံးစွဲသူများကိုကာကွယ်ရန် crypto တွင်ဥပဒေမူဘောင်လိုအပ်သည်ဟုနော်ဝေးအက်ဖ်အေကပြောကြားသည်
2021-06-22 18:56:19 | ဘလောက်...
စားသုံးသူများအတွက်သင့်လျော်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာရန် cryptocurrency အတွက်ဥပဒေမူဘောင်လိုအပ်ကြောင်းနော်ဝေးဘဏ္Financialာရေးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (FSA) ကအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု။ ထို့အပြင် crypto နှင့်ဆက်စပ်မတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်မြင့်မားဖန်တီ...
ကျောက်ဆူးသည် Dapper Labs စီးဆင်းမှုလက္ခဏာကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လောင်းကြေးကိုထပ်မံပေးသည်
2021-06-22 18:51:40 | ဘလောက်...
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသော crypto-bank Anchorage Digital သည် Flow blockchain ၏ထင်ရှားသောလက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည့် FLOW အားထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်အကူအညီများပေးမည်ဟုအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ Anchorage ဥက္ကChairman္ဌ Diogo Monica ၏အဆိုအရကုမ္ပဏီ၏စီးဆင်းမှုကို FLOW အားထောက်ပံ့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းဆိ...
Stronghold Digital Mining သည်စွန့်ပစ်ကျောက်မီးသွေးကို Bitcoin သို့ပြောင်းလဲရန်ဒေါ်လာ ၁၀၅ သန်းအထိမြှင့်တင်ခဲ့သည်
2021-06-22 18:50:13 | ဘလောက်...
သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်သုံးသော cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲသည်အင်္ဂါနေ့တွင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စွမ်းအင်သုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Stronghold Digital Mining မှရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁၀၅ မီလျံကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တိုးမြှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု...
Bitcoin $ 30,000 မှာထောက်ခံမှုတွေ့ရှိ; $ 36,000 မှာခုခံရင်ဆိုင်နေရသည်
2021-06-22 18:48:42 | ဘလောက်...
Bitcoin (BTC) ရောင်းချမှုသည်တနင်္လာနေ့မှ စ၍ ဒေါ်လာ ၃၀, ၀၀၀ ခန့်တွင်တည်ငြိမ်နေပြီး၎င်းသည်ရေတို ၀ ယ်သူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သုံးလနီးပါးကျဆင်းမှုကြောင့် Bitcoin သည်ခုခံနိုင်မှုပမာဏ၏ ၃၆, ၀၀၀ ဒေါ်လာခန့်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေသည်။ Bitcoin သည်ဖြန့်ချိချိန်တွင်ဒေါ်လာ ၃၁, ၇၀၀ ဝန်းကျင်တွင်ကုန်သွယ်ခဲ့ပြီး...
အိန္ဒိယ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုမှ ၀ ယ်ယူမှုများအပေါ် ၂% အခွန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်
2021-06-22 18:45:36 | ဘလောက်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုများမှဝယ်ယူသော Cryptos များသည်အခွန်ကောက်ခံမှုကို ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာကောက်ခံနိုင်သည်ဟုစီးပွားရေးတိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း၏အစီရင်ခံချက်အရအိန္ဒိယအခွန် ဦး စီးဌာနမှအချိုးကျညီမျှခြင်းကောက်ခံခြင်းအခွန်သည် ၂ ဝရာခိုင်နှုန်း crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်သက်ဆ...
လေ့လာသုံးသပ်သူများက $ 30,000 beckons အဖြစ် Bitcoin စျေးနှုန်းအလားအလာအပေါ်ခွဲ
2021-06-22 18:44:05 | ဘလောက်...
Bitcoin ကိုဒေါ်လာ ၃၀, ၀၀၀ ဖြင့်ထောက်ခံမှုပြုသည်နှင့်အမျှလေ့လာသုံးသပ်သူများကနောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာမည်ကိုခွဲခြားထားသည်။ တချို့ကဒီအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိသည်နှင့် $ 40,000 တစ်ပြန်လာ။ အခြားသူများက ၀ ယ်လိုအားနည်းမှုကိုထောက်ပြ။ နောက်ထပ်ကျဆင်းမှုများဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒေါ်လာ ၃၀, ၀၀၀ အကွာအဝေးနိမ့...
တရုတ် Bitcoin သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီသည်ပထမဆုံးစက်ပစ္စည်းများကိုကာဇက်စတန်သို့တင်ပို့သည်
2021-06-22 18:37:01 | ဘလောက်...
BIT Mining သည်တရုတ်နိုင်ငံစီချွမ်ပြည်နယ်ရှိလုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်တွင်စက်တင်ဘာ ၃၂၀ ကိုစက်တင်ဘာ ၃၂၀ တွင်ကာဇက်စတန်သို့တင်ပို့လိုက်သည်။ အများပိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်ကုမ္ပဏီ (NYSE: BTCM) သည်ဇူလိုင်လမစတင်မီအခြားစက် ၂, ၆၀၀ ကိုထပ်မံပေးပို့ရန်စီစဉ်ထားသည်။ တနင်္လာနေ့ကြေညာချက်။ ကုမ္ပဏီ၏ကျန်စက်များကိုပြည်ပ...
Moonpay သည် crypto banking service provider bcb group တွင်အစုရှယ်ယာများပါဝင်သည်
2021-06-22 18:34:10 | ဘလောက်...
MoonPay cryptocurrency ငွေပေးချေမှုအက်ပလီကေးရှင်းသည် crypto ကုမ္ပဏီများအတွက်ဘဏ်၏ရထားလမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် BCB Group နှင့်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းမှုတွင် MoonPay မှ BCB အုပ်စုတွင် "သိသာထင်ရှားသော" အစုရှယ်ယာများဝယ်ယူခြင်းပါဝင်ကြောင်းကုမ္ပဏီများကပြောကြားသည်။ သဘောတူညီချက်ကုမ္ပဏ...
Celo တိုကင်များကိုရှယ်ယာလုပ်ရန် deutsche telekom နှင့်လုပ်သည် a16z
2021-06-22 18:30:04 | ဘလောက်...
ဥရောပ၏ထိပ်တန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Deutsche Telekom သည်စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီကြီး Andreessen Horowitz (a16z) နှင့်လက်တွဲကာမိုဘိုင်း၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက်ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မှုသည်နောက်ဆက်တွဲမျိုးဆက်သစ် blockchains များတွင်ပါ ၀ င်သည့်စွန့်စားမှုဆို...